कोरोना भाइरसको केन्द्र वुहानको सडकमै भेटियो शव | Himal Times
Home अन्तराष्ट्रिय कोरोना भाइरसको केन्द्र वुहानको सडकमै भेटियो शव
वुुुुहान — कोरोना भाइरसको प्रकोपले चीन मात्रै होइन, पूरा विश्व नै हायलकायल छ । बिहीबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेको छ । वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुरै चीनभर र विश्वका २० भन्दा बढी देशमा देखिएको छ । शुक्रबार बिहानसम्म चीनमा कोरोना भाइरसका कारण २१३ जनाको मृत्यु भएको छ भने झन्डै १० हजार संक्रमित भएका छन् ।
यसैबीच बिहीबार वुहानको खुला सडकमा एक जना व्यक्तिको शव भेटिएको छ। कोरोना भाइरसको ‘इपिसेन्टर’ वुहानको सडकमा एक हातमा प्लास्टिकको झोला समातेकै अवस्थामा शव भेटिएको हो। कोरोनाको संक्रमण फैलिनुभन्दा पहिले भीडभाड हुने सडकमा ती व्यक्तिको नजिक जाने हिम्मत कसैले गरेनन्।
बिहीबार सबैभन्दा पहिले पत्रकारहरुले ती व्यक्तिको शव देखे। केही समयपछि शरीर पुरै छोपिने ‘प्रोटेक्टिभ सुट’ लगाएर प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्यो। उनीहरुको नीलो ब्ल्याङ्केटले ती व्यक्तिको शव ढाके। उनीहरुले सुपरमार्केटबाट कार्टुन बक्स ल्याएर शव छोपे।
केही समयपछि एउटा सेतो भ्यान आएर पहेँलो ‘सर्जिकल ब्याग’मा शव उठाएर लगेको थियो। उनको शव रहेको ठाउँमा फोरेन्सिक टिमले केही स्प्रे छर्‍यो। कर्मचारीले सडक सफा गरे।
एएफपीले ती व्यक्तिको मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे केही पुष्टि नभएको बताएको छ। उनी झन्डै ६० वर्षका देखिने एएफपीले जनाएको छ। शवको नजिकै उभिएकी एक महिलाले ती पुरुषको मृत्यु कोरोना भाइरसकै कारण भएको हुन सक्ने बताइन्। ‘डरलाग्दो अवस्था छ। हिजोआज थुप्रै मान्छे मरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
नेपाल, कम्बोडिया, श्रीलंका, फिनल्यान्ड, फिलिपिन्स, भारत – १/१ जना संक्रमित रहेका छन ।
Previous articleएनआरएन मलेसियाकाे ५० हजार चेक काण्ड केहाे ?(भिडियो सहित)
Next articleभाईरस नलाग्दै उद्धार हाेस ,
भक्तपुरमा एक महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
सांसद र कर्मचारीले यसपाली दशैं भत्ता नपाउने !
माओवादीबाट एमालेमा लागेका सांसदहरूको पद गुम्ने